बार अनुसार कुन बार के काम गर्नु शुभ हुन्छ ? जान्नुहोस् ! – चितवन मिडिया
बार अनुसार कुन बार के काम गर्नु शुभ हुन्छ ? जान्नुहोस् !
हामी धेरै जसो कार्य शुभ मुहूर्तमा गर्ने गर्छौं। शुभ मुहूर्तमा गरेको काम सधैं सफल हुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा छ। त्यसैले, घरमा कुनै शुभ कार्य होस् र बाहिर निक्सिने काम परोस हामी सधैं शुभ सहित हेरेर नै काम गर्ने गर्छौं। यस्तोमा, आज हामी तपाईंलाई हप्ताका ७ दिन मध्ये कुन दिनमा के काम गर्नु शुभ हुन्छ भन्ने बारे बताउँछौं
आइतबार काठको काम, अस्पताल, पद ग्रहण वा कुनै अन्य आधिकारिक काम आइतबार गरिनु पर्छ। सूर्य शासन, शक्ति, काठ र सरकारी चीजहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यस्ता कार्य आइतबार गर्नु शुभ मानिन्छ।
सोमबार यदि तपाईं खानपान सम्बन्धि काम सुरू गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै यदि तपाईं रेस्टुरेन्ट वा मिठाई पसल खोल्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ वा पानीसँग सम्बन्धित काम सुरु गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंको लागि सोमबारको दिन उत्कृष्ट रहनेछ।
मंगलबार यदि तपाईं घर-जग्गा वा निर्माण सम्बन्धि कुनै काम गर्न चाहानुहुन्छ भने मंगलबारको दिन तपाईंलाई यी काम गर्न उत्कृष्ट साबित हुनेछ।
बुधबार यदि तपाईं पैसा लेनदेन, शेयर बजार वा परामर्श दिने कुनै काम शुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने बुधबार यसका लागि अत्यन्त शुभ दिन हुनेछ। बुधको सम्बन्ध धनसँग हुन्छ। त्यसैले, यस दिन धन सम्बन्धित कार्य गर्नु शुभ मानिन्छ।
बिहिबार यदि तपाईं शिक्षा, धार्मिक कार्य र खाद्यान्न सम्बधि कुनै काम सुरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने बिहीबार तपाईंको लागि उत्तम दिन हुनेछ। बिहिबारको दिन यस्ता कार्य सुरु गर्नाले उक्त कार्य दीर्घकालिन हुनुका साथै राम्रो परिणाम पनि प्राप्त हुनेछ।
शुक्रबार शुक्रलिई कला, प्रतिभा र सौन्दर्यको कारक मानिन्छ। त्यसैले, यदि तपाईं सौन्दर्य प्रसाधन, कपडा, रसायन, औषधि वा पार्लरको काम सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने शुक्रबार तपाईंको लागि उत्तम दिन रहनेछ।
शनिबार जुनसुकै काम पनि यदि तपाईं लामो समय सम्म चलाउन चाहानुहुन्छ, जस्तै यदि तपाईं कुनै नोकरी लामो समयसम्म गर्न चाहानुहुन्छ वा कुनै व्यापार धेरै समयसम्म चलाउन चाहानुहुन्छ भने यी सबै कार्य शनिबारको दिनबाट सुरु गर्नुहोस्।bigulnews